VaJudha Vasingatendi Vachaparadzwa | Upenyu hwaJesu
JESU ANOPA CHIDZIDZO KUBVA PAZVIITIKO ZVIVIRI
MUMWE MUKADZI AKAREMARA ANOPORESWA PASABATA
Jesu aedza aedzazve kuita kuti vanhu vafunge nezveukama hwavo naMwari. Panomukazve mumwe mukana wekuti adaro paanopedza kutaura nevanhu vanga vari kunze kwemba yemuFarisi uya.
Vamwe vavo vanotaura nezvechimwe chiitiko chinosuwisa chevaGarireya “vaiva neropa rakanga rasanganiswa nezvibayiro zvavo naPirato [kureva Gavhuna weRoma Pondiyo].” (Ruka 13:1) Vari kurevei?
Zvimwe vaGarireya ava ndivo vakaurayiwa pakaratidzira zviuru zvevaJudha zvichitsutsumwa nekushandisa kwakanga kwaita Pirato mari yaibva munzvimbo yaichengeterwa pfuma patemberi kuti avake mugero waizounza mvura muJerusarema. Pirato anogona kunge akawana mari iyi achibatsirwa nevakuru vakuru vepatemberi. Vanhu vari kurondedzera nyaya iyi vanogona kunge vari kufunga kuti izvi zvakaitika nekuti vanhu vekuGarireya vaiva nezvakaipa zvavakanga vaita. Asi Jesu haabvumirani navo.
Anobvunza kuti: “Munofunga kuti vaGarireya ava vakanzi vaiva vatadzi kupfuura vamwe vaGarireya vose nokuti vakatambura zvinhu izvi here?” Mhinduro yake ndeyekuti kwete. Asi anoshandisa chiitiko ichocho kunyevera vaJudha achiti: “Kana mukasapfidza, imi mose muchaparadzwa saizvozvowo.” (Ruka 13:2, 3) Jesu anobva ataura nezveimwe tsaona inofanira kunge ichangobva kuitika uye ingangove yakakonzerwa nekuvakwa kwaiitwa mugero uyu paanobvunza kuti:
“Vaya vane gumi nevasere vakawirwa neshongwe yeSiroami, ichibva yavauraya, munofunga kuti vakanzi vaiva nemhosva huru here kupfuura vamwe vanhu vose vaigara muJerusarema?” (Ruka 13:4) Mhomho yevanhu iyi inogona kunge iri kufunga kuti vanhu ivavo vakafa nekuti vaiita zvakaipa. Jesu anozviramba zvekare. Anoziva kuti “nguva nezviitiko zvisingafanoonekwi” zvinoitika uye kuti ndizvo zvinogona kunge zvakakonzera tsaona iyi zvekare. (Muparidzi 9:11) Asi vanhu vanofanira kudzidza chimwe chinhu pachiitiko ichochi. “Kana mukasapfidza, imi mose muchaparadzwa saizvozvowo,” anodaro Jesu. (Ruka 13:5) Asi nei ari kusimbisa izvi iye zvino?
Ari kudaro nekuti ari kuona paava neushumiri hwake. Anofananidza nyaya yacho achiti: “Mumwe munhu akanga aine muonde wakadyarwa mumunda wake wemizambiringa, uye akauya achitsvaka zvibereko pauri, asi akashayiwa. Akabva ati kumutarisiri wemizambiringa, ‘Tarira atova makore matatu andauya ndichitsvaka zvibereko pamuonde uyu, asi hapana andawana. Uteme! Chokwadi iwo unoramba uchitambisirei ivhu?’ Achipindura, iye akati kwaari, ‘Tenzi, uregei gore rinowo, kusvikira ndautimbira nokuisa mupfudze; zvino kana ukabereka zvibereko munguva yemberi, zvakanaka; asi kana ukarega, muchautema henyu.’”—Ruka 13:6-9.
Kwemakore anopfuura matatu, Jesu anga achiedza kuita kuti vaJudha vave nekutenda. Asi vashomanana ndivo vakabvuma kuva vadzidzi vake uye vanogona kunzi zvibereko zvekushanda kwake nesimba. Iye zvino paava mugore rechina reushumiri hwake, ava kushanda zvekushanda zviya. Ari kuita sekuti ari kutimbira nekuisa mupfudze pamuonde uyo uri kufananidzira vaJudha, paari kuparidza nekudzidzisa muJudhiya nemuPereya. Zvii zvinozoitika? VaJudha vashomanana chete ndivo vanomuteerera. Rudzi rwacho rwese harwo rwaramba kupfidza uye chasara kuparadzwa.
Hapaperi mazuva kusatenda kwevanhu ava kusati kwabuda pachena zvekare. Jesu ari kudzidzisa musinagogi musi weSabata. Anoona mumwe mukadzi ava nemakore 18 asingagoni kufamba akati twasu nemhaka yedhimoni rakamugara. Achimunzwira tsitsi, Jesu anomuudza kuti “Iwe mukadzi, wasunungurwa pakushayiwa kwako simba.” (Ruka 13:12) Jesu anoisa maoko ake paari, uye anobva atokwanisa kutwasura musana wake otanga kurumbidza Mwari.
Izvi zvinogumbura mukuru anotungamirira sinagogi, uyo anobva ati: “Pane mazuva matanhatu anofanira kuitwa basa; naizvozvo, uyai murapwe ipapo, kwete pazuva resabata.” (Ruka 13:14) Mukuru uyu haasi kuramba kuti Jesu ane simba rekurapa asi ari kupa vanhu mhosva yekuuya kuzorapwa paSabata. Jesu anomusiya asina remuromo paanoti: “Vanyengeri, mumwe nomumwe wenyu haasununguri nzombe yake pasabata kana mbongoro yake mudanga oenda nayo kunoinwisa mvura here? Zvanga zvisina kukodzera here, kuti mukadzi uyu, mwanasikana waAbrahamu, uyo Satani ave akasunga, . . . kwemakore gumi nemasere, asunungurwe muusungwa uhwu pazuva resabata?”—Ruka 13:15, 16.
Vanhu vari kumushora vanoshaya pekupinda nekunyara, asi ruzhinji rwevanhu rwuripo runofara pamusana pezvinhu zvinoshamisa zvavari kuona zvichiitwa naJesu. Ari muno muJudhiya, Jesu anodzokorora mifananidzo miviri yeuprofita ine chekuita neUmambo yaakambotaura ari mugwa muGungwa reGarireya.—Mateu 13:31-33; Ruka 13:18-21.
Zviitiko zvipi zviviri zvinoshandiswa naJesu kunyevera vaJudha, uye nyevero yacho ndeyekuti chii?
Mufananidzo wemuonde usingabereki unobudisa sei pachena mamiriro ezvinhu erudzi rwevaJudha?
Mukuru anotungamirira sinagogi ari kupa vanhu mhosva yei, uye Jesu anofumura sei unyengeri hwake?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe VaJudha Vasingatendi Vachaparadzwa